ဂီနီ: အ GAC များအတွက်ကုန်ကြမ်းအရိုင်းပို့ကုန် - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » စီးပွားရေး "ဂီနီ: အ GAC များအတွက်ကုန်ကြမ်းအရိုင်းပို့ကုန် - JeuneAfrique.com
တိုင်းပြည်၏အနောက်မြောက်ဘက်, ဂီနီလူမီနီယမ်ကော်ပိုရေးရှင်း (GAC) တွင်တစ်ဦးသတ္တုတူးဖော်ရေးလိုက်လျော၏ကိုင်ဆောင်သူအရိုင်း၏ကုန်ကြမ်း 70 000 တန်ချိန်ပဲတင်ပို့လျက်ရှိသည်။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကို Global လူမီနီယမ်၏လက်အောက်ခံလူမီနီယံစျေးကွက်၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့် 12 သန်းတန်ချိန်ရန်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ယင်းသယံဇာတပရွက်ဆိတ်တောင်ပို့ Boke မှာတော့ဂီနီ၏အနောက်မြောက်ဘက်ရှိရထားလာသည်နှင့်ခရီးသွားရာတွင်အတူမှတ်ခံရဖို့ သတ္တုတွင်းနှင့် Kamsar ၏Sangarédiသတ္တုရိုင်းဆိပ်ကမ်းကိုအကြားဂီနီ Alumina ကော်ပိုရေးရှင်း (GAC), စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကို Global လူမီနီယမ် (Ega) ၏လုပ်ငန်းခွဲ။
နှစ်ဦးကြီးစွန်း GAC နှင့်၎င်း၏ရိုးရာကုန်သည်ဘာဂီနီအရိုင်းကုမ္ပဏီ (CBG) တို့အကြားပူးတွဲအသုံးပြုခြင်းကိုမှဘာသာရပ်တစ်ခုရထားလမ်း 135 ကီလိုမီတာဖြင့်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ အဆိုပါရထားလမ်းသတ္တုတူးဖော်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (ANAIM) မှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲသောပြည်နယ်, ကပိုင်ဆိုင်သည်။ လယ်ပြင်၌ရှိသောအခြားတက်ကြွကစားသမား SMB ကုမ္ပဏီကြီး (သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီ Boke) ဖြစ်ပါသည်။
Ega အဘို့, ဝယ်ယူရေး 2013 နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်တဲ့ကာလအဘို့ဤလိုက်လျော, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲတစ်ချိန်က၎င်း၏အထက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် secure ရန်မဟာဗျူဟာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မူလက 2017 စတင်ခဲ့သည့်အဆိုပါထုတ်လုပ်မှု,, အချိန် ယူ. အခြေခံအဆောက်အအုံခိုင်မာရေး, နှောင့်နှေးခဲ့သညျ။
Outlook နဲ့ "အလွန်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲ"
မီးသူ၏ဗတ္တိဇံတရားသည်, ဂီနီ Alumina ကော်ပိုရေးရှင်းယူအေအီးမှအရိုင်း၏သြဂုတ်လ570 000 တန်ချိန်တင်ပို့လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာ startup အဆင့်တခါ, 12 သန်းတန်ချိန်အနေနဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်ယူမှုနှုန်းခန့်မှန်းထားသည်။
"ပထမသင်္ဘောပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထားခဲ့တယ်။ ဒါဟာကော်မရှင်အဆင့်၌တည်ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများဖြည်းဖြည်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြ၏။ ဒုတိယလှေ, လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားအတိအကျဖြစ်ပါတယ် Jeune Afrique မာတင် Simard, အ GAC ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအရှင်စစ်ဆင်ရေးအလုပ်အကိုင်များစဉ်အတွင်း 700 628 အကြောင်းကိုသော့ချက်နှင့်အတူအမျိုးသားရေးဂျီဒီပီ, ကြီးထွားလာ, 1 သန်း (000 သန်း) generate ပါလိမ့်မယ်။ "
ကျွမ်းကျင်သူများက 2026 ကအဆင်သင့်စျေးကွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ "လူမီနီယံ၏စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏နိမ့်ဆုံးမှာ [တစ်တန်ကိုအောက်တိုဘာလနှင့်ဇူလိုင်လ2250 အကြား 1 850 ဒေါ်လာ 2018 2019 ကျဆင်း] ။ ကျနော်တို့ကဒီယာယီအခွအေနေကြောင်းကိုငါသိ၏။ အဆိုပါအလားအလာအလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့, "မာတင် Simard လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ "ဒီစျေးကွက်ခိုင်မာရေးဖြစ်ပါတယ်" ဟုသတ္တုတွင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် Aboubacar Diallo Akoumba အထူးကုကပြောပါတယ်။
Tanéné, Sub-စီရင်စုSangarédi (Boke) ၏ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်, ဂီနီ Alumina ကော်ပိုရေးရှင်း၏သတ္တုတူးဖော်ရေးလိုက်လျော 690 စတုရန်းကီလိုမီတာကိုတိုးချဲ့။ GAC နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဂလိုဘယ် Alumina အောက်မှာ 2001 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်မေလတွင် 2013 တစ်လုံးလုံးပိုင်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကို Global Alumina (Ega), ငါးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူမီနီယံကတည်းကဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂီနီအတွက် GAC စီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်နှစ်ခု Kamsar အတွက် alumina စက်ရုံများ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပါဝငျသညျ။ စီမံကိန်းသေသညျမသေချာစဉ်က၎င်း၏ခေါင်းဆောင်များ, ချဉ်းကပ်ဖို့သတိထားဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးကဖိုင်တွဲ။